July 15, 2020 577
नेपाली भिडियो’हरुको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । विभिन्न विषयमा स’माबेश गरि मानिषहरुलाई मनोरंन्जन दि’नका लागि दिनानुदिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् ।
समाजमा चलि आएका विभिन्न विषय’लाई प्रस्तुत गरिएको यो भिडीयोले दर्सक’हरुलाई मनेरन्जन दिने प्रयास गरेको छ । सानो सानो कुराहरुलाई समाबेश गरी तयार पारीएको यो हास्यब्या’ङ्गय टेलिश्रृंखला ‘खस खस’ को भाग ६ ले दर्सकहरुलाई राम्रो मनोरन्जन दिने छ ।
सोहि अनुरुप विष्णु रिजालको निर्देशनमा बनेको उक्त हास्यब्याङ्गय टेलिश्रृंखला युट्युब मार्फत सार्वज’निक भएको छ । युटुब च्यानल टिभी नेपालीले यस’लाई सार्वजनिक गरेको हो ।
यसका निर्देशक विष्णु रिजाल हुन । दर्शकहरुको मनोरन्जनको लागि युट्युब च्यानल टिभी ने’पालीले बिभिन्न प्रकारका कमेडी भिडियो, टेलिश्रृं’खलाहरु अपलोड गर्ने क्रममा आज हा’स्यब्याङ्गय टेलिश्रृंखला ‘खस खस’को भाग ६ सार्वजनिक गरेको हो ।
दर्सकह’रुलाई मनोर’न्जन दिने उद्देश्यले टिभी नेपालीले उक्त टेलिश्रृंखला सर्बजनिक गर्ने गरेको हो । उक्त सिरि’यललाई विकास कार्कीले निर्माण गरेका हुन् । सिरियलमा मुकुन्द मैनालि, निराजन पाण्डे, विकास कार्की, विकास न्यौपाने, नमुना दाहाल, रश्मि शर्मा, आशा तामाङ्ग अभिनय छ ।
त्यस्तै गीता राई, डायमण्ड सुनुवार, सन्दि’प वाग्ले, फेशल भाई, लगायतको अभि’नय देख्न सकिन्छ । आशा तामाङले कलाकारहरुलाई श्रृगारेकी छिन् भने रन्जना पौडेलले सम्पादन गरेकी छिन् । उक्त सिरियलको कथा लेखन तथा निर्देशन रिजा’ललेनै गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो ….
Prevनायिका श्रद्धा कपूर र नेपाली युवा रोहनको बिहेको हल्ला सुने पछि बाबु शक्तिले यस्तो भने…
Nextराजेश हमाललाई हेर्न पैसा चोरेका पल शाह महानायक बारे बोले..(भिडियोसहित)
‘आमा गुमाʼएका जुम्ल्याहालाई पाल्छौ’, भन्दै टिकटकबाट हिट भएका जुम्ल्याहा दिपा-दमन्ता भेट्न गए । सहयोग दिँदा दुख सम्झेऽर रोए (भिडियो हेर्नुस)
कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको संरक्षक मिडियामा, झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा? (भिडियो सहित)
टिकटक बनाउने क्रममा झोलुङ्गे पुलबाट खसेर एक जना गम्भीर घा’इते [हेर्नुहोस्]